mardi, 29 mars 2016 22:24
29 marsa Farafangana : Tohizana amin’ny ady amin'ny fahantrana indray
Vavaka iraisam-pinoana tao amin'ny EKAR Katedraly ny maraina, avy eo niroso tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo tamin'ireo Fasan'ny mahery fo Amboanio sy tao Mahatsara Atsimo ary teo amin'ny tsangambaton'ny mahery fo akaikin'ny tsena.
Moramanga : Niala bala ny filoha
Nitaky ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina azy ireo tamin'ny taona 2015 ny filohan'ny bekotro ao Moramanga. Nitaky ihany koa ny hahatonga an'i Moramanga ho Faritra fa ity farany no novalian’ny filoha hoe « efa renivohitry ny tolona i Moramanga fa fampandrosoana no tadiavina, fa ho jerena akaiky kosa ny fangatahana tamin'ny taona lasa ».
mardi, 29 mars 2016 17:46
Festival Batrelaky 2016 : Antonia no « Miss Batrelaky » ary Modeste no « Bogosse Mitrelatrelaky »
Nahoraka kosa ny famaranana ny « festival Batrelaky » tao amin'ny Kianja Monisipaly niaraka tamin'ny fifantenana ny « Miss Batrelaky » izay niantefa tamin’i Antonia izay naneho ny fomban'ny vehivavy Antefasy rehefa terabao ary i Modeste no « Bogosse Mitrelatrelaky » izay nampiseho ny fiainan'ny mpivarotra saribao avy any ambanivohitra aty Farafangana.
mardi, 29 mars 2016 16:55
Farafangana : Feno olona tao Cocobeach
Toy ny isan-taona dia any amin'ny Cocobeach ny ankamaroan'ny olona eto Farafangana no mitsangatsangana rehefa Alatsinain'ny Paka. Na dia tanàna amoron-dranomasina aza i Farafangana dia ny Alatsinain'ny Paka sy Pantekôty no feno olona hatrany ny torapasika sy vody voanio.